IWoopra ye-iPad ilapha-iGeofumadas
NgoNovemba, 2011 Internet kunye neBlogs
IWoopra yenye yezonaapps zibalaseleyo zokujonga ukugcwala kwendawo yokuhlala. Ngexesha elidlulileyo Ndenze uhlolo yesicelo sedeskithophu, ukongezelela kukho inguqu yeGoogle Chrome kwaye ngoku iguqulelwe ngokutsha i-iPhone, kwinguqu ye-2.0 yendalo yonke ehambelana ne-iPad.
Uyilo luhleli ngokuthe nkqo, njengakwinguqulelo yangaphambili, nangona ukufikelela okuncinci kukuvumela ukuba uhambe ungakhange uye / uza. Ngoku ivumela izaziso kwaye unokuba neendawo ezininzi ezisebenza ngaxeshanye zilinde nje izaziso ezithile ezifana:
Xa umsebenzisi angena kwelizwe elithile, apho sinephulo elikhethekileyo.
Xa umsebenzisi oye kwisayithi ubuya ngaphezu kwexesha le-50.
Xa umsebenzisi efika igama elithi «AutoCAD 2012»
Xa isayithi ifinyelela ngaphezu kwe-20 ukutyelela ngokufanayo
Xa umsebenzisi eqhagamshelana neGeofumadas ngokusebenzisa ingxoxo (Ngoku ixhasa ingxoxo)
Ibhodi edibeneyo ihlukaniswe kwii-6, zifana ne-desktop application kwisilawuli solawulo:
Igrafu zingaphi iindwendwe ezikhoyo ngexesha, kule ngxaki kukho i15
Ipesenti phakathi kweendwendwe ezintsha kunye neziphindaphindiweyo, kulo mzekelo i-3 ye-12 sele ihambe ngee-Geofumadas
Igrafu yotyelelo ngeyure, ukwahlula iindwendwe kumbono wephepha. Njengoko ubona, nge-3 emva kwemini ngexesha laseMexico, undwendwelo lwe-1,669 kunye nezenzo ezingama-3,929 zizonke ezifikile
Uhlobo lwe-thermometer luhlukanisa abo babhala kwiblogi, abo bafunda kuphela kunye nalabo abaye bahlala becinga nge static kwinqaku ye-37.5 yesibili.
Imithombo ephambili yokutyelela
Imibala yeendwendwe ngokobhaliso oluthile. Ndisebenzisa tyheli ukufika okokuqala, iorenji kwabo bangakhange baye kwesi sihlandlo amaxesha ama-5, emdaka kuluhlu lwe-5-10, oluhlaza phakathi kwe-10-25, kunye nobomvu kutyelelo olungaphezulu kwama-25. Oku kusivumela ukuba siqonde eminye imijikelezo yeveki, ifuthe le-retweet okanye ukufikelela kwiposti esandula kulayishwa.
Kwilinye iphaneli luhlobo lwamagama abalulekileyo abo bafika kwiinjine zokukhangela
Kwaye kwiphaneli yokugqibela ilizwe elininzi iindwendwe liboniswa, ngaphakathi kungcaciso yeendwendwe ngelizwe.
Ipaneli nganye inokufikelela kwiinkcukacha ezithe kratya, umzekelo, ukuba uluhlu lweendwendwe lukhethiwe, ungazibona zonke ezikhoyo ngoku ezinesishwankathelo esisiseko kodwa xa ukhetha oko ungabona iinkcukacha ezifana nale iboniswe ngezantsi: Undwendwe 149,699 uqhagamshela IPanama, isebenzisa i-Intanethi Explorer ngeWindows Vista, ifike kule ndawo izihlandlo ezili-9, ibone amaphepha angama-69 ewonke, yenze amanyathelo angama-69 ngexesha loqhagamshelo lweeyure ezimbini ukusukela kutyelelo lwayo lokuqala, olwalunentsuku ezingama-34 ezidlulileyo.
Eyona nto ibhetele, iimbali zeendwendwe, ezibonakalayo kuphela kwisicelo se-iPad, uphando olucacisiweyo lulula.
Olu hlobo lwedatha luhlala luluncedo kwiziza, kuba ngamafutshane, amanani-nkcazo anokunceda ukuphucula indlela umxholo olungiselelwe ngayo ukuphucula amava okukhangela. Akunakwenzeka ukuba wazi ukuba ngubani umsebenzisi kwelinye icala, sisixeko nje abasuka kuso kunye nokuziphatha okubrawuza abanako-ngaphandle kokuba ungumguquleli Phuma kakuhle ukuba unxulumene nesayithi ngaphezu kwamaxesha e-500 kwaye ndiyazi ukuba uhlala emaphethelweni EPeru Lima-. Kunye -ngexesha lokuphumla-Ukubona indlela yokuziphatha kwabasebenzisi abaza kuhamba phakathi kwamaphepha kuyanceda ukuphucula ii-hyperlinks, kuba umntu obhalileyo uyayazi inqaku elaphendula ngesizathu sokufika, ke oko kungenwayo kulungiswa ngokushiya ikhonkco lelo phepha okanye ukuhlaziya Umxholo okwaziwa ukuba utshintshile ngokuhamba kwexesha okanye omxholo wawo wawungowexeshana.
Rhoqo kwiinyanga ezintandathu idatha iyacinywa, kuxhomekeke kwiakhawunti onayo neWoopra. Ke idatha ayihlali ingunaphakade, kwaye neenombolo zomsebenzisi azitshintshi ngalo lonke ixesha i-cache icacisiwe okanye kusetyenziswa imo ye-incito.
Enye into endiyenayo, isilumkiso sendawo esweleyo, indilahle ukuba ndiyenze kodwa ukususela kunyaka kwenzekile kabini Ndiye ndafunda ukuyibhaqa ukuze ndingene kwaye ndikhusele ukuwa. Bekusondele ukuba kwenzeke kum kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ngenxa yesizathu esinye, ukunyanzelisa itemplate endiza kuthi ekugqibeleni ndiyilahle ngokupheleleyo. Indlela yokuyifumana kukuba abasebenzisi bazama ukuvula iphepha elinye ngaphezulu kwamaxesha amathathu ngaphantsi komzuzu, ukuba oko kuyenzeka kangangesithuba semizuzu eli-10, i-Apache iya kuphakamisa isilumkiso kwaye Hostgator izomisa indawo kunye netikiti ukusombulula iingxaki. Ukugqibela kwam ukwenza inzame ngokuhlaziya itemplate yeArthemia, kwaye ndibeke iliso kwindlela yokuziphatha kunye neWoopra, xa bendingalindelanga kangako kuyo, ngeyure engxamisekileyo ye-4 PM eMexico ixesha lesilumkiso lifikile emva koko ndenyuka, ndatshintsha itemplate ndafunda ukuba umxholo, nangona unomtsalane, awunakwenzeka kwiindawo ezinemifanekiso emininzi.
Nangona yabhengezwa ukusukela ngoSeptemba, kude kube ngoku inokukhutshelwa; Okwangoku, ukuyizama, kuzisa ukukhululeka ngakumbi ekuphatheni iingxelo, nangona kwasekuqaleni kungangcono ukuba zenze ngcono izixhobo zokubuyela umva, kuba eyona nto iphambili kuyo ikwixesha lokwenyani, ke uGoogle Analytics usayimfuneko nangona kungenjalo imibuzo yemihla ngemihla kodwa iintsingiselo zeveki nganye. Babhengeze ukuba bakha inguqulelo ye-Android, eya kuthi ngokuqinisekileyo ikhule ngakumbi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IGeobide, i-ED50 kunye ne-ETRS89 yoLungelelwaniso lweNkqubo
Post Next Iplanethi evulekileyo, amaPhepha angama-77 ukutshintsha ingqondoOkulandelayo »
2 Iimpendulo "iWoopra ilapha nge-iPad"
Ukupheka kwengqondo kulungiswe kunye nehlazo elifunekayo.
Don G othandekayo!
Ukufunda uluvo lwakho: «... ngaphandle kokuba kunjalo ngumguquli we-eGeomate odibanise nesiza ngaphezulu kwamaxesha angama-500 kwaye sele ndiyazi ukuba uhlala emaphethelweni ePeru ...» ndiyaphendula 🙂 kwaye ndingathanda ukongeza ukuba:
AKUKHONA ndihlala ngaphandle kwePeru (ndingenza njani?), Wawunokuthetha ngaphandle kwe- "Square Lima"; Uxolo andikwazi ukuzichaza ngakumbi apha, kodwa ndihlala eLima, ndihlala eLima esePeru, ewe, kunjalo.
Izibingelelo ezivela ePeru, umhlobo